Fifanekena ara-barotra :: Vitsy mpahalala ny lanjan’ny asan’ireo nôtera eto amintsika • AoRaha
Fifanekena ara-barotra Vitsy mpahalala ny lanjan’ny asan’ireo nôtera eto amintsika
Betsaka no tsy mbola mahafantatra ny asan’ireo nôtera na mpandraharaha taratasy fifanekem-barotra eto Madagasikara. Vitsy ihany koa ry zareo satria roa amby fitopolo fotsiny no misahana an’io asa io manerana ny Nosy.
Nisy ny atrikasa nandinihina ny fomba entina hana­mo­rana ny fombafomba amin’ny fanagiazana fana­nana aorian’ny filazana
antoka voasoanian’ny mpira­ki­teny mpanao soratra, izay nokarakarain’ny Vovonam-pirenen’ny nôtera, teny Anosy, omaly.
“Efa misy ny ezaka natao ho fampitomboana ny nôtera”, araka ny fanazavan’io vovonana io. Fantatra anefa fa raha dimy amby roapolo ny isan’ireo tokony horaisina rehefa misy fifaninanana dia roapolo ihany no voaray satria vitsy ireo liana amin’ izany. Araka ny fanazavana dia hisy hatrany ny fanaovana fifaninanana ho an’ireo liana amin’ity asa ity amin’ny volana novambra ho avy izao.
Anisan’ny noresahin’ny Vovonam-pirenana mandritra ny atrikasa ny fampahafantarana mikasika ny ampahany amin’ny asan’izy ireo, toy momba ny tany na trano nataon’ny olona iray antoka nandritra ny findramam-bola tany amin’ny banky na ireny mpampindram-bola madi­nika ireny. Voalaza fa tranga misy ny tsy fahafahan’ny mpindram-bola mamerina ny volany ka tsy maintsy hiroso amin’ny fanaovana lavanty ny tany na trano ny mpampin­dram-bola. « Miditra an-tsehatra ny nôtera mampahafantatra amin’ny mpindrana sy mpampindram-bola amin’ny tokony hanaovana ny lavantin’ireo entana natao antoka tamin’ny findramam-bola », araka ny fanampim-panazavana.
Tranga tsy nampoizina Vaky ny fonjakelin’ ny Zandarimaria
Varotra sy asa tanana :: Miaka-bidy ny fanaka vita amin’ny hazo sarobidy
Kanto iadiana amin’ny herisetra :: Hanavao ireo hetsika ara-kolontsaina hibeazana ny tanora ny « Tambohobe »